“Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.” Genesisy 2:16-17
“Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao.” Jaona 17:3
Rehefa miteny hoe “fahalavoana” ny kristiana, dia mby ao an-tsaina ireo pejy voalohany ao amin’ny Baiboly, raha tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama sy Eva. Lavon’ny fakam-panahy izy ireo ; ny menarana, dia ny devoly, no naka fanahy azy ireo.
Noforonin’Andriamanitra ny zavatra rehetra, mba hahasambatra ny zanak’olombelona, ary afaka nihinana tamin’ny hazo rehetra tao amin’ny saha izy, afa-tsy tamin’ny hazo iray. Koa raha mihinana amin’ny “hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy” ny olona, dia ho faty. Nampiditra fisalasalana momba ny tenin’Andriamanitra anefa ny devoly, raha nilaza hoe: “Tsy ho faty tsy akory ianareo”, sy nanampy hoe: “Ho tahaka an’Andriamanitra ianareo” (Genesisy 3:4-5). Nanisika hevitra izy hoe tsy tian’Andriamanitra hitovy aminy ny olona, ka raha tsy mankatò Azy izy ireo, dia ho tafakatra amina toerana ambonimbony kokoa, satria hahaleo tena, tsy miankina amin’Andriamanitra, ary hanjary mitovy aminy; dia hahavita tena izy ireo, ka ho afaka mamaritra ny atao hoe tsara na ratsy.
Nihinana tamin’ny voan’ny hazo voarara i Adama sy Eva, ka dia tanteraka izay nolazain’Andriamanitra. Noroahiny tsy ho eo anatrehany izy mivady, tsy hanana fifandraisana aminy, nefa tompon’andraikitra ihany amin’ny fiainany. Izany toetra izany no nolovaintsika tamin’izy ireo.
Fa Jesosy dia naharesy ny devoly, ary nanokatra ho an’ny olona, lalana hahafahany manana fifandraisana amin’Andriamanitra indray. Adama no lohan’ny taranaka lavitra an’Andriamanitra ; ary toy izany koa, Jesosy no lohan’ny taranaka manana ny ain’Andriamanitra, dia ireo izay nanatona Azy. Jesosy, tamin’ny nahafatesany, dia nanome azy ireo ny fiainana mandrakizay, dieny ankehitriny. Ahoana no hanatonana Azy? Mino izay nolazainy sy izay nataony. Mivavaka aminy.